Akụkọ - Ailika na-ewebata ngwa ọrụ nke Okike Ike Mbara Igwe
1. Ike nke anyanwụ maka ndị ọrụ: a na-eji obere ikike sitere na 10-100w mee ihe maka iji ike kwa ụbọchị na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na-enweghị ike, dị ka plateaus, agwaetiti, ebe ndị a na-azụ atụrụ, mpaghara ókèala na ndị agha ndị ọzọ na ndụ ndị nkịtị, dị ka ọkụ , TV, ihe ndekọ redio, wdg; 3-5kw ezinụlọ usoro grid-ejikọrọ ike ọgbọ usoro; Photovoltaic pump pump: maka ị drinkingụ na ịmị mmiri nke mmiri miri emi Wells na mpaghara na-enweghị ọkụ eletrik.
2. ationgbọ njem: dịka ọkụ mgbagharị, ọkụ ọkụ / ọkụ ọkụ ụgbọ oloko, ịdọ aka ná ntị okporo ụzọ / ọkụ ọkụ, oriọna n'okporo ámá, ọkụ mgbochi ihe mgbochi, okporo ụzọ awara awara / okporo ụzọ okporo ụzọ, okporo ụzọ na-enweghị ike n'okporo ụzọ, wdg.
3. Nkwurịta okwu / nkwukọrịta ubi: anyanwụ unattatt ngwa ndakwa nri ọsọ agba anọ ọdụ, ngwa anya cable mmezi ọdụ, agbasa ozi n'ikuku / nkwurịta okwu / paging ike usoro; Sistemụ fotovoltaic nke dị n'ime ime obodo, obere igwe nkwukọrịta, ndị agha GPS ike ọkọnọ.
4. Petroleum, oké osimiri na meteorology: cathodic nchedo ike anyanwụ usoro pipeline mmanụ na ọdọ mmiri n'ọnụ ụzọ, anụ ụlọ na mberede ike ọkọnọ mkpọpu ala ikpo okwu, oké osimiri akụrụngwa akụrụngwa, meteorological / hydrological chọpụtara akụrụngwa, wdg.
5.Ikike maka oriọna ụlọ: dịka oriọna nke ụlọ, oriọna n'okporo ámá, oriọna aka, oriọna ịma ụlọikwuu, oriọna ugwu, oriọna ịkụ azụ, oriọna ọkụ ojii, oriọna na-egbu ọkụ, oriọna nchekwa ọkụ, wdg.
6. Ebe nchekwa ike fotovoltaic: ebe ntanetị nke 10kw-50mw nke nwere onwe ya, ebe ikuku na-arụ ọrụ ikuku, nke na-arụkọ ọrụ mmanụ (dizel), nnukwu ebe a na-adọba osisi na-adọba ụgbọala, wdg.
7. Ihe owuwu nke anyanwụ: ijikọta ike ike anyanwụ na ihe ụlọ iji mee ka ụlọ ndị buru ibu n'ọdịnihu nweta afọ ojuju na ọkụ eletrik bụ isi ụzọ mmepe n'ọdịnihu.
8. Uzo ndi ozo gunyere: ijikọ aka na ugbo ala: ugbo ala / igwe eletriki, akụrụngwa na-ebu batrị, igwe ikuku, ikuku ikuku, igbe ihe ọ coldụ coldụ oyi, wdg; Usoro ohuru ikike mmeghari ohuru maka mmeputa nke mmiri hydrogen na mmanu oku; Inye ike maka mmiri nnu mmiri; Satellites, ugboelu, ohere oghere ike mbara igwe, wdg.